Assistant Regional Manager | Job in Myanmar ﻿
15.10.2018, Full time , Telecommunications
Company: Kinetic Myanmar Technology Co., Ltd.
Kinetic Myanmar Technology Co., Ltd.Kinetic Myanmar Technology Co.,Ltd. is located in 797, Bldg A/1, Rm A/301, 3rd Flr, Bogyoke Aung San Rd., MAC Tower II,, Lanmadaw township, Yangon Region, Myanmar. Company's main business category is Telecommunication Suppliers & Equipment.
•	ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး အဖွဲ့အစည်းနှင့် လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။
•	B.E/B.Tech/AGTI (EP, EC, Mechanical, Mechatronics) ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။
•	Age Over (30)
•	Telecom Field Management အတွေ့အကြုံရှိသူများဦးစားပေးမည်။
We offer •	Male(4)Posts
Work location အမှတ်(၁၇၆/၁၇၈)၊ ကံ့ကော်ဆေးခန်းအပေါ်(၃)လွှာ၊ ၀ါးတန်းလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်။
For Mon State
Company Industry: Assistant Regional Manager
Job posted: 15/10/2018
● Age between 20 ~ 27 ရှိရမည်။ ● Computer Basic Microsoft (Word, Excel, Powerpoint, Adobe Pagemaker) ကျွမ်း ကျင်သူဖြစ်ရမည်။ ● Marketing အတွေ့ကြုံ (၁) နှစ် ရှိသူဖြစ်ရမည်။ ● လိုအပ်ပါက နယ်ခရီးသွားနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
● Computer Microsoft ( Word/Excel/Power Point) အခြေခံရှိသူဖြစ်ရမည်။ ● အရောင်းပိုင်းအတွေ့အကြုံရှိသူ ဦးစားပေးမည်။ ● လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး စကားပြောဆို ရာတွင် သွက်လက်ဖြတ်လက်မှုရှိသူဖြစ်ရမည်။
● Age (30) အောက်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ ● လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့ကြုံရှိသူဖြစ် ရမည်။
● Tower အမြင့်တက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ ● မြန်မာတစ်ပြည်လုံးရှိ မည်သည့်ဒေသများတွင် မဆို သွားရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ ● Team ဖြင့် အလုပ်လုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ ● ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူ ဖြစ်ရမည်။
● Age over 20 ● Computer Basic Microsoft (Word, Excel, Powerpoint, Adobe Pagemaker) ကျွမ်း ကျင်သူဖြစ်ရမည်။ ● ရုံးလုပ်ငန်းအတွေ့ကြုံအနည်းဆုံး (၁)နှစ်ရှိသူဖြစ် ရမည်။
120 Days, Full time , Telecommunications
•	BD Mnanagerအားအပြည့်အ၀ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရမည်။ •	လူမှုဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည်။
•	Car Rentalပိုင်းနှင့်ပတ်သက်၍ကောင်းမွန်စွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရမည်။ •	လူမှုဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ပြီးလုပ်ငန်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်သောကိစ္စများအားဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းရှိရမည်။
140 Days, Full time , Telecommunications
•	Office Management ပိုငျးအားဆောငျရှကျနိုငျ၍ Account knowledge ရှိသူဖွဈရမညျ။
•	Project Management ပိုငျးနှငျ့ Solar ပိုငျးလုပျကိုငျဖူးသူဖွဈပွီး လိုအပျပါကနယျခရီးသှားနိုငျရမညျ။
184 Days, Full time , Telecommunications
•	အလုပ်ကြိုးစား၍ ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဦးစားပေးမည်။ •	ဒေသခံများကိုဦးစားပေးခန့်ထားပါမည်။
Job ads in Networking Jobs and in Mon State
•	အလုပ်ကြိုးစား၍ ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဦးစားပေးမည်
•	နိုင်ငံခြားတွင်အလုပ်လုပ်ဖူးသူဖြစ်၍Technologyနှင့်Business Developmentပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ၂နှစ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။
228 Days, Full time , Telecommunications
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည်။ Site Engineer	/Team Leader
•	ဆက်ဆံရေးပြပြစ်ကောင်းမွန်ပြီး အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။
257 Days, Full time , Telecommunications
•	လိုအပ်ပါက နယ်တွင်သွားရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ For (ပဲခူးမြို့/ကန့်ဘလူမြို့)
271 Days, Full time , Telecommunications
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည်။ Manager (Operation & Maintenance)
359 Days, Full time , Telecommunications
Procurement and Oversea Logistics Executive
485 Days, Full time , Telecommunications
496 Days, Full time , Telecommunications
Job ads in Maintenance Jobs and in Kayin State
Job ads in Maintenance Jobs and in Mon State
Job ads in Maintenance Jobs and in Tanintharyi Region
Job ads in Business Management Jobs and in Kayin State
566 Days, Full time , Telecommunications
Project Engineer (Manager)
596 Days, Full time , Telecommunications
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည်။ •	အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
Fiber Team Leader
Assistant Regional Manager business management Jobs jobless Jobsinyangon Kinetic Myanmar Technology Co., Ltd. Business Management Jobs Business Management Jobs Assistant Regional Manager Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Work in Yangon (Rangoon)(10715)
Work in Yangon Region(2373)
Admin & HR Assistant F (4)
Manager Associate (Strategy And Investment)
Young Learner Assistant Teaching
Sales Supervisor – Regional